Fampandrosoana ara-toekarena :: Mampirisika ny fanomezana tosika ny fambolena ny Banky iraisam-pirenena • AoRaha
Fampandrosoana ara-toekarena Mampirisika ny fanomezana tosika ny fambolena ny Banky iraisam-pirenena
Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy, omaly, tetsy Anosy ny antontan-kevitra natao hifanarahana (Mémorandum) ara-toekarena narafitry ny Banky iraisam-pirenena ho an’i Madagasikara. Misongadina ao anatin’izany ireo teboka telo mamaritra an’ireo toromariky ny Banky iraisam-pirenena hoentina mampandroso ny sehatra ara-toekarena eto amintsika ho an’ny fito taona manaraka.
Isan’ny goavana ny “fampirisihana ny fitondram-panjakana malagasy hampiasa sy hanome lanja ny fananan’i Madagasikara olona betsaka afaka miasa, indrindra eo amin’ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena”.
“Esorina ny sakana ara-drafitra miteraka ny tsy fahafahan’ireo olom-pirenena miasa amin’ireo sehatra misy azy. Tokony hapetraka koa ny fanatsarana ny tontolo manodidina ny fandraharahana hahafahana manampy ny mponina hihoitra amin’ny fiainana”, hoy ny toromarika avy amin’ny Banky iraisam-pirenena.
Mitaky fanomezan-danja ny fambolena, izay miantoka ny fampiroboroboana ny tsenam-barotra, ny Banky iraisam-pirenena. “Ilaina ny tosika ara-teknôlôjia mba hialan’ireo tantsaha amin’ny fambolena tsy miteraka tombony ho azy”, araka ny hetahetan’ny Banky iraisam-pirenena hatrany. Mahatsapa ireo tompon’andraikitra eo anivon’ity banky ity fa “sehatra iray mahatonga ny firoboroboan’ny sehatra ara-toekarena eto amintsika ny fanondranana entana any ivelany”.
“Ny tanjona amin’ny famoahana an’ity antontan-kevitra ity dia mba hanomezana torolalana ho an’ny fanatsarana ny sehatra ara-toekarena eto Madagasikara. Misy ireo zava-baovao hoentina, tokony hampiakatra an’ireo sehatra samihafa hampiroborobo ny toekarena. Hitondra herijika eo amin’ny sehatry ny fandraharahana izany mba hahafahana mandeha haingana any amin’ny fampandrosoana ara-toekarena”, hoy i Marie Chantal Umanyiligira, mpandrindra ny asan’ny Banky iraisam-pirenena eto Madagasikara, omaly.
Nilaza ho velom-bolo amin’ny fivoaran’ny tontolo ara-toekarena eto amintsika ity solontenan’ny Banky iraisam-pirenena eto Madagasikara ity, indrindra taorian’ny fifidianana filoham-pirenena ara-demokratika natao, tamin’ny taona 2019. Nambaran’ny minisitry ny Toekarena sy ny tetibolam-panjakana, Randriamandrato Richard fa: “hotohizana ireo ezaka efa natao manodidina ny sehatra ara-toekarena”.